उत्पादनको मोडलिङमा निकै राम्रो आम्दानी छ – साक्षी लम्साल - KavrePress
उत्पादनको मोडलिङमा निकै राम्रो आम्दानी छ – साक्षी लम्साल
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २६, २०७९ समय: १९:३०:१०
मोडलिङमा स्थापित नाम हो साक्षी लम्साल । ७ वर्ष अघिबाट साक्षीले मोडलिङ यात्रा सुरु गरेकी हुन् । उनी पछिल्लो समयकी व्यस्त र सफल मोडल हुन् । उनले ८ वर्ष अघि स्काई अर्थ वासिङ मेसिनको बिज्ञापनमा पहिलो पटक ब्यबसायिक मोडलिङ गरेकी थिईन् । त्यसपछि उनलाई एक पछि अर्को गर्दै ब्यबसायिक मोडलको रुपमा प्रस्ताव आयो । साक्षीले त्यसपछि बेला स्कुटर, एलआईसी इन्सुरेन्स, जगदम्बा सिमेन्ट, डिस होम जस्ता विभिन्न ब्यबसायिक उत्पादनमा मोडलिङ गरिसकेकी छिन् । प्रोडक्ट मोडलिङसँगै उनले सोही बेला देखि म्युजिक भिडियोमा पनि मोडलिङ गरिन । चलचित्र स्वर्ग मेरो गाउँ बाट नेपाली चलचित्र उधोगमा आफुलाई नायिकाको रुपमा समेत चिनाउन सफल उनी यतीबेला अर्को नयाँ चलचित्र ‘बाई रोड’को तयारीमा छिन् । प्रस्तुत छ नव क्षितिज साप्ताहिकको लागी अरबिन्द्र गौतमले मोडल साक्षी लम्सालसँग गरिएको कुराकानी
अहिले के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
यतिबेला नयाँ चलचित्र बाईरोडको अभिनय कार्यशालामा व्यस्त छु । कोशिस क्षत्री र मेरो मुख्य भूमिका रहने यो चलचित्र चाँडै छायाँकनको लागि फ्लोरमा जाँदैछ । त्या बोहेक केही म्युजिक भिडियोको छायाँकनको पनि तयारी गर्दैछु ।
अहिलेसम्म कतिवटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसक्नु भयो र भिडियोमा मोडलिङको कमाई कस्ते छ ?
म्युजिक भिडियो मोडलिङ यात्रा मेरो सात वर्ष पुगिसकेको छ । यो अबधीमा पाँच दर्जन म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरिसकेकी छु । यो अवधिमा मैले अभिनेता पल शाह, यसराज गराच, दिक्पाल कार्की जस्ता नायकसँग भिडियोमा मोडलिङ गरिसकेको छु । यस्तै रामकृष्ण ढकालदेखि थुप्रै अग्रज गायकहरुसँग उहाँहरुको म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरिसकेको छु । उहाँहरुसँग काम गर्दाको अनुभव केही फरक छ । जहाँसम्म पारिश्रमिकको कुरा छ । मोडलिङमा यती पैसा भन्ने फिक्स छैन । राम्रै पारिश्रमिक लिने गरेको छु । मोडलिङको कमाईले सन्तुष्ट छु ।
गीतको म्युजिक भिडियो मोडलिङ र विभिन्न उत्पादनको विज्ञापनमा गरेको मोडलिङमा पारिश्रमिक कत्तिको अन्तर छ नी ?
त्यो त धेरै अन्तर छ । एउटा म्युजिक भिडियोमा भन्दा पाँच गुना बढी पारिश्रमिक एउटा विज्ञापनको मोडलिङ गर्दा लिने गरेको छु । एउटा उत्पादनमा मोडलिङ गरेपछि सोही प्रकारको अर्को उत्पादनमा मोडलिङ गर्न पाईन्न । सोही कारण पनि कुनै व्यबसायिक बस्तुको मोडलिङमा राम्रो पारिश्रमिक पाईन्छ ।
अहिलेसम्म कतीवटा बिज्ञापनमा काम गरिसक्नु भएको छ ?
हालसम्म स्वदेशी र अन्तराष्ट्रिय गरेर करिब दुई दर्जन विज्ञापनमा काम गरिसकेको छु । रमाईलो प्रसँग के भने, अन्तराष्ट्रिय ब्रान्डको बिज्ञापन निर्माण खर्च हाम्रो नेपाली मध्यम बजेटको चलचित्रको भन्दा बढी हुँदो रहेछ । त्यसैले मल्टिनेशनल ब्रान्डका बिज्ञापनमा काम गर्दा त्यत्तिकै राम्रो पारिश्रमिक प्राप्त हुने गरेको छ ।
मोडलिङमा आफ्नो भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ?
अबस्या राम्रो छ । किनकी अहिले नै म व्यबसायिक मोडलको रुपमा स्थापित भईसकेको छु । म्युजिक भिडियो पनि त्यत्तिकै मात्रामा खेलेको छु । पछिल्लो पुस्तामा मैले मोडलिङमा राम्रो स्थान पाईरहेको छु । त्यसैले यो क्षेत्रमा मेरो भविष्य अझ उज्ज्वल देखेको छु ।
अनि अभिनय र मोडलिङमा मात्रै व्यस्त रहने की घरजम पनि गर्ने लक्ष्य छ ?
अहिलेको अबस्थामा तत्काल घरजम गर्ने कुनै लक्ष्य छैन । मोडलिङ र अभिनयमै व्यस्त छु । अहिले यो क्षेत्रमा करिअर चम्किरहेको बेला विवाह गरेर यो करिअरलाई विश्राम दिने पक्षमा छैन । अझै केही वर्ष अभिनय तथा मोडलिङ क्षेत्रमा निरन्तता दिएपछि बल्ल विवाहको बारेमा सोचौंला ।
एक महिना अगाडिको बनेपा र अहिलेको बनेपा हेर्नुस् कति फरक छ : शान्ति रत्न शाक्य
चौंरीदेउराली गापा अध्यक्ष चौंलागाईंलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण
काभ्रे जिल्लाको चौंरीदेउराली गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाल–भारत मैत्री विकास साझेदारी कार्यक्रम अन...
‘हाम्रो पनि मन हुन्छ…’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
दृष्टिबिहीनहरूले भोग्ने गरेका दुखसुखको कहानीलाई गीतमा उतारिएको ‘हाम्रो पनि मन हुन्छ…’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो डिलाईटे...
श्रीकृष्ण ढकाल नाम गरेको मानिस हराएको सूचना, खोजी गरिदिन परिवारको आग्रह
काभ्रेपलान्चोक – बर्ष ४९ का श्रीकृष्ण ढकाल बिगत ५ दिनदेखि बेपत्ता भएका छन । काभ्रेको मन्डनदेउपुर नगरपालिका वडा न १...
म्युजिक भिडियो निर्देशन क्षेत्रमा राज गर्दै निरेन श्रेष्ठ
काभ्रेपलान्चोक – पछिल्लो समय नयाँ नयाँ कलाकार आउने क्रम जारी छ । कोहि खुबी भएर आउने गरेका छन् भने कोहि रमाइ...
पत्रकार नवराज बजगाईले गरे बृद्धबृद्धा र असाहयलाई खाद्यान्न र लत्ता कपडा सहयोग
काभ्रेपलान्चोक – पत्रकार नवराज बजगाईले बिगत वर्षहरुमा जस्तै यो साल पनि काभ्रेको धुलिखेल–१२, मा मानव कल्याण समाजले...
बरिष्ठ गायक तथा संगीतकार नागेन्द्र श्रेष्ठको संगीतमा’तिमी बिना’ बजारमा
काठमाडौँ । गायिका सुरक्षा सेन्चुरीको स्वरमा रहेको ’तिमी बिना’ गीतको भिडियो बजारमा सार्वजनिक भएको छ ।हङ्गकङ्ग निवासी गीतक...